Tabex inoshanda sei?
Tabex chigadzirwa chemushonga chinopesana nekusvuta. Ndokumbirawo muzive kuti hachisi chinodhaka chemhando ipi neipi asi chakasikwa chose chigadzirwa chakagadzirwa kubva pane chakabviswa chirimwa. Inowanikwa kutenga pasina mushonga. Kufarira kwepasirese kwakakura mumakore apfuura nekuda kwekushanda kwayo.
Tabex ine yakazara mhedzisiro pane pathogenetic nzira dze nicotine kutsamira:
Iyo alkaloid cytisine inopesana nesimba reicicine receptors.
Cytisine ine yakafara yekurapa renji kupfuura nicotine iyo inoita kuti chimiro chayo chechiito chengeteke.
Cytisine inoderedza kushushikana kwezviratidzo zvine chekuita nekumiswa kweiyo nicotine kudhakwa.
Zvichienzaniswa neicikotini, ine simba rakanyanya kushomeka padanho retsinga uye neropa
Mukati meuropi hwako
Cytisine ndeye agonist weiyo cholinoreceptors kubva kune inomera ganglia uye ndeyeboka reboka rematsotsi emishonga. Iyo inofadza iyo nicotine inonyanya kunetseka cholinoreceptors yeiyo postsynaptic membranes pane iyo inomera ganglia, chromaffin maseru pane mamorekuru chikamu cheiyo suprarenal gland uye sinocarotid reflexogenic nzvimbo, iyo inoguma nekufadza kwenzvimbo yekufema, kunyanya mukati mekufungisisa, kuenzanisa kweadrenaline kuburitswa ne iyo medullary yechipfuva cheiyo suprarenal gland uye kukura mukumanikidza kweropa. Ichitevera kumakwa kwayo kubva mudumbu, cytisine inotamba chinzvimbo chekuputa chinoderedza iyo nguva yekudyidzana pakati pekuputa uye zvinoenderana zvinogamuchirwa.
Izvi zvinotungamira mukudzikira zvishoma nezvishoma uye kumisa kwevanoputa uye panyama nicotine kupindwa muropa. Vazhinji vaongorori vanosimbisa mukuyedza kwakasiyana-siyana kwemishonga kubatanidza pakati pemishonga yecytisine nefodya, sekutsanangurwa kwaakaitwa naDale & Laidlaw uye inotsigirwawo nemhedziso dzechisimba senge ganglion-inokurudzira kupfuura ganglioblocking Zachowsky, Anichkov, Dobrev naPaskov, Daleva, nezvimwe. .zvakawanda zvine simba kunge ganglion-inomutsa kupfuura se ganglioblocking zvakanyanya zvine simba se ganglion-inomutsa kupfuura se ganglioblocking broker. Mimwe mienzanisiro yemishonga iyi miviri yakawanikwa mukuyedza kuputa uye cytisine yakanyanya kuwanda kupfuura hunhu. Mimwe mienzanisiro yemishonga iyi miviri yakawanikwa mukuyedza pamakonzo nekitsi, kana paguinea pig ileum uye rat diaphragm, iyo miba yecytisine iri 1/4 kusvika 2/3 kubva padanho rekusvuta. Sisitimu, Cytisine ine isina kusimba tsinga, Cytisine ine simba risina simba mukuenzanisa tsinga.
Mashandisiro aungaita Tabex Zvidzidzo zvekuchipatara paTabex Nezve iyo Laburnum Muti